China DTY polyester mesh lining jira nedhaimani meshes vagadziri uye vanotengesa | Huasheng
jira rekupfeka reyoga
fashoni kupfeka jira
polyester donje jira
Upamhi (+ 3% -2%)
Kurema (+/- 5%)
Inofema. Ruoko runyoro-kunzwa. Kutambanudza zvishoma. Ona-kuburikidza.
Mvura Wicking, Anti-Bhakitiriya, Kutonhora
Iyi DTY polyester mesh lining jira, yedu chinyorwa nhamba FTT10262, ine dhaimani mesh. Iyi fema inofema uye yakapfava. Panguva imwecheteyo, nekuda kwehunyanzvi hunhu hweDTY, ine yakatambanuka zvishoma.
Tricot mesh lining jira rinoshandiswa sekupfekedza pasi peanopfeka zvipfeko uye bhachi. Micheka yemesh inofema uye inoshandiswa sezvo ichikwanisa kuchenesa ziya kubva mumuviri. Panguva imwecheteyo, iyi DTY mesh jira rine maburi edhaimani inodziya uye yakasimba. Iyo yakakodzera kune lining yeasina kujairika kupfeka, mitambo yemitambo, uye zvimwe zvinyorwa zvevaraidzo.
DTY inodaidzwa kuti polyester yakadhirowewa shinda yakavezwa, inova inorapwa kupisa nekumonyoroka. DTY polyester yarn ichagadzira inobata uye yakasununguka kubata kune iyo warp yakarukwa mesh machira. Aya mavara anogadzira machira eDTY seyakanakisa yekuwedzera kune iyo nyika yemachira uye machira. Ivo vanouya mumarudzi akasiyana siyana uye mapatani.
Kuti usangane neyakaomarara mhando yevatengi, aya machira machira anogadzirwa neyedu yepamusoro warp yekuruka michina yakatangwa kubva kuEurope. Muchina wekuruka uri mumamiriro akanaka uchaona kuruka kwakanaka, yunifomu mesh, uye yakajeka mameseji. Vashandi vedu vane ruzivo vanozotarisira zvakanaka idzi machira machira kubva ku greige imwe kusvika yapedza imwe. Kugadzirwa kwemachira ese mesh kuchazotevera maitiro akaomarara ekugutsa vatengi vedu vanoremekedzwa.
Huasheng inotora yakakwira mhando tambo kuti ive nechokwadi chekuita uye mhando yeedu mesh machira anodarika epasirese indasitiri zviyero.
Strict yepamusoro kuzvidzora kuona kuti pajira riya machira Utilisation zvazvingava mukuru kupfuura 95%.
Dhizaini yakasimba uye timu yehunyanzvi ine makore echiitiko mune yepamusoro-yekupedzisira machira, dhizaini, kugadzira, uye kushambadzira.
Huasheng anotangisa nhevedzano nyowani yemachira machira pamwedzi.
Huasheng inotarisira kuenderera mberi nekugadzira huwandu hwakanyanya hwevatengi. Isu hatisi chete kupa edu mesh machira kune vatengi vedu, asi zvakare kupa yakanakisa sevhisi uye mhinduro.
With makore 16 'ruzivo kuti pajira riya micheka, Huasheng ane nenyanzvi akashumira nyika 40 vatengi pasi rose.
Fekitori yakananga kutengesa mutengo, hapana mugove anowana iwo mutsauko wemutengo.
Pashure: DTY polyester yakagadziriswa mesh machira
Zvadaro: Polyester Micro pajira riya jira zvemitambo
Mesh Net Mucheka
Mesh Netting Mucheka
Poly Mesh Jira
Polyester Mesh Jira
Nyoro Mesh Jira
Nemhepo warp knitting 100% polyester 75D mes ...
Heavyweight 100% polyester pajira riya jira kutamba ...
Custom 100% polyester mitambo shiri ziso pajira riya fabr ...
Polyester Micro pajira riya jira zvemitambo
Polyester nhabvu eyelet mesh jira
Nylon spandex simba mesh tulle machira
Pfupi kuunzwa kwesani kuburikidza nemucheka
Wakamborota here rimwe zuva, wakarara pamahombekombe uine swimsuit, wobva wawana ganda rakatsvuka muviri wese pasina mitsara yetani? Uyu ndiwo mucheka th ...
Chii knitting jira, uye ndiye d ...
Knitting ndiyo jira kugadzira michina kubudikidza interloping pamusoro shinda. Saka ingangove seti imwechete yemavara inoshandiswa ichibva kune imwechete d ...